Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. प्रेरक प्रसंग – Page3– Janata Live
जीवनमा जो पनि सफल हुन चाहन्छ । सफलताका लागि चाहिने प्रमुख अस्त्र भनेको मेहनत हो । सबैको सोच सफल हुने भए पनि मानिसहरु सोच्दैनन् कि असफलताको कारण आफूमै हुन्छ । आचार्य चाणक्यले चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै कुरा उल्लेख गरेका छन्, जसलाई पालना गर्ने व्यक्ति सफल हुन सक्छ । सफलता प्राप्तिका लागि व्यक्तिमा केही विशेष गुण हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । यस्ता गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैनन् । १. खुलापन खुलापनको अर्थ हो कि व्यक्तिले सधैं आफ्नो कान, आँखा र दिमाग सधैं खुला राख्नु हो । जो व्यक्ति आफ्नो आसपास भइरहेका घटनाप्रति सचेत रहन्छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैन ।...
बुद्ध शिक्षा-धर्मको विभिन्न अर्थमध्ये एक चित्त वा कर्म वा जीवन सुधार्नु वा शुद्धिकरण हो । तर धर्मको नाममा चित्त नै बिग्री सकेपछि धर्म कसरी गर्ने ? प्रसंग-हिजो एक दम्पती बिहारमा आयो र चैत्यतिर पनि गए । केही नभनी श्रीमतीले दुबो टिप्न थालीन । मैले भने- (१) यो लकडाउनको समयमा अपरिचितहरुलाई यहाँ आउन अनुमती छैन । फेरि आउनु भयो आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हो । (२) अर्काको जुनसुकै समान होस अनुमती लिएर मात्र चलाउने, लिने गर्नुपर्दछ । तब श्रीमान् हुनेले भन्यो-घरमा बस्दा बस्दा वाक्क भएर घुम्न आएको । हुनत अनुमती लिनुपर्छ । तर भगवानको लागी भनेर लिएको । कोही नदेखेर नसोधेको...
एकपटक गौतम बुद्ध एक गाउँमा पुगेका थिए । मानिसहरु आफ्ना समस्या लिएर बुद्ध भएको ठाउँमा पुग्थे र समस्याको समाधान भएपछि खुुसी हुँदै फर्किन्थे । त्यही गाउँको सडकको किनारामा एक जना माग्ने बस्ने गरेको थियो । मानिसहरु बुद्धकोमा गएको उसले ध्यान दिएर हेरिरहेको थियो । उसलाई अचम्म लागिरहेको थियो कि बुद्ध कहाँ जाँदा मानिसहरुको अनुहार निकै दुखी खालको हुन्थ्यो तर फर्किएर आउँदा हास्दै आउँथे । त्यसपछि उसले म पनि किन नजाने त भन्ने सोच्यो र एक दिन बुद्ध भएको स्थानमा गयो । मानिसहरु लाइनमा बसेका थिए । बुद्धसँग आफ्ना समस्या सुनाउँथे । जवाफ पाएपछि खुसी भएर फर्कन्थे । जब उसको पालो...
प्रेरक प्रसंग : कालमाथिको जित
एकपटक महाराज युधिष्ठिर मन्त्रीसित छलफल गर्दै थिए । एक ब्राह्मण गुनासो लिएर राजसभामा पुगे । बदमास गुन्डाहरूले उनका गाई खोसेर लगेका थिए । युधिष्ठिरले ब्राह्मणलाई बाहिर प्रतीक्षा गर्न लगाए । मन्त्रीसितको वार्तालापपछि युधिष्ठिरसित भेटघाटका लागि छिमेकी देशका राजदूत पुगे । त्यसपछि पनि अन्य भेटघाटमा व्यस्त हुँदाहुँदै उनले ब्राह्मणलाई समय दिन सकेनन् । अन्त्यमा सबै काम सिध्याएर निस्किँदा उनी थाकिसकेका थिए । उनले ब्राह्मणलाई भने- आज म निकै थाकेको छु । तपाईं भोलि आउनुस् है ! म अवश्य सहयोग गर्नेछु । युधिष्ठिर आराम कक्षतिर लम्किए । ब्राह्मण निकै दुःखी भए । बाहिर निस्किँदै गर्दा उनको भेट राजकुमार भीमसित भयो । भीमले...
खुसी कसरी बन्ने ? एक रोचक कथा सहित
काठमाडौं – खुसी अमुर्त कुरा हो । यसलाई देख्न सकिदैन । यसलाई केवल अनुभुति गरिने मात्रै हो । यो के कारणले हुन्छ भन्ने पनि यकिन हुदैन । व्यक्ति अनुसार खुसी हुने कारण फरक हुन्छ र त्यहि व्यक्ति पनि समय अनुसार फरक फरक कुराले खुसी हुन सक्छ भने एक पल्ट खुसी भएको कुराले उसलाई फेरि खुसी नबनाउन सक्छ । यसरी हेर्ने हो भने खुसी अमुर्त त हुन्छ नै, खुसी क्षणभङ्गुर पनि हुन्छ । खुसी कसरी बन्ने भन्ने कुराको खोजी मान्छेले होस सम्हाले देखि गर्न थाल्छ । मानव समाजमा खुसीको खोजी कहिले देखि भयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन तर जो सुकैले सहजै...
समस्यालाई कसरी टाढा राख्ने ?
काठमाडौं – गौतम बुद्धसँग जोडिएका कथामा हामीले जीवनका सबै दुःख भगाउने सूत्र पाउँछौं । यदि यी सूत्रलाई व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने हामी सुखी र सुखी हुन सक्छौं । यहाँ यस्तै एक कथाबारे जानकारी लिऔं जसमा समस्यालाई कसरी टाढा राख्ने भनेर सिकाइएको छ। एक दिन भगवान् बुद्ध आफ्नो सभामा पुगे। त्यतिवेला उनको हातमा डोरी थियो । बुद्धले आशनग्रहण गरे र केही नभनी डोरीमा गाँठो पार्न थाले । बुद्धका शिष्यहरू त्यो हेरिरहेका थिए । डोरीमा गाँठो पारेपछि बुद्धले सबैलाई प्रश्न गरे, मैले यो डोरीमा तीन ठाउँमा गाँठो पारें । अब भन, यो त्यही डोरी हो, जुन गाँठो पार्नुअघि थियो एक शिष्यले...
प्रेरक प्रसंग : मनोबलको जित
सन् १५३४ मा जन्मेका ओदा नोबुनागा जापानका प्रथम महान् एकीकरणकर्ता मानिन्छन् । उनले लामो समय तत्कालीन जापानी सेनाको नेतृत्व गरेर थुप्रै लडाइँ लडे । उनकै बहादुरीले गर्दा जापानको एकीकरण भएको मानिन्छ । उनी थोरै सैनिक र कम सैन्य संसाधनबाटै आफूभन्दा निकै शक्तिशाली सेनालाई हायलकायल पार्न समर्थ थिए । उनी आफ्ना बहादुर सैनिक साथीहरूको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई बहादुरीसाथ युद्धमा वीरता देखाउन उत्साहित गराउन निकै कुशल सैनिक कमान्डर थिए । एकपटक नोबुनागाले आफ्ना सैनिक योद्धाको मनोबल उकास्न फरक तरिका अपनाए । उनले आफ्ना सिपाहीलाई एक मन्दिरमा लगे । त्यहाँ उनले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने– मेरा बहादुर सिपाहीहरू हो ! मलाई थाहा...
यदि कोही व्यक्तिले हाम्रो अपमान गर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ ?
भगवान वुद्ध एक गाउँमा उपदेश दिँदै थिए। उनी भन्दै थिए–प्रत्येक मानव धर्ती जस्तै सहनशील र क्षमताशील हुनुपर्छ । रिस यस्तो आगो हो जसमा क्रोध गर्ने व्यक्तिले अर्कोलाई पनि जलाउँछ र आफू पनि जल्छ ।’ सभामा सबै शान्तिसँग बुद्धको वाणी सुनिरहेका थिए । तर, त्यो सभामा स्वभावैले निकै रिसाहा व्यक्ति पनि बसिरहेका थिए। जसलाई बुद्धका यी वाणी तर्कहीन लागिरहेको थियो । केही समयसम्म त उसले बुद्धका यी वाणी सुनिरहे । तर, अति भएपछि आफूमाथि नियन्त्रण गुमाउँदै बुद्धलाई गाली गर्न थाले । भन्न थाले–तिमी पाखण्डी हौ, ठूला ठूला कुरा गर्ने तिम्रो काम नै हो । तिमीले मानिसलाई भ्रमित गरिरहेका छौ । तिम्रा...
आजभन्दा झण्डै २६०० वर्ष पहिले नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका भगवान् गौतम बुद्धले धेरै जीवनोपयोगी ज्ञान दिएका छन् । गीतामा उल्लेखित कर्म योग, ज्ञान योग र भक्ति योगलाई व्याख्या गरे जस्तै तीन योग, चार आर्य सत्य र आठ वटा मार्गको रूपमा व्याख्या गरेका उनले प्रत्युत्य समुत्पादका १२ वटा मार्ग पनि बताएका छन् । उनले भनेको चार आर्यसत्यमध्ये दु:ख छ भन्ने कुरा र यसको अवस्थाको बोध, दु:खको कारण आसक्ति र अन्तत: अविद्या हो भन्ने बोध, दु:खको निवारण नै दु:खको अन्त्य छ भन्ने कुरा र यसको साक्षात्कार र दु:खको निवारणको मार्ग भनेको नै सत्य हो भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बोध र यसको पालना गर्नुलाई...